Noocyada Cilmi Baarista
Qaybtaan waa qayb kale oo ka mid ah cashardii hore ee aan ku soo baranay nucyada cilmi baariseed ee jira. Cilmi baaris waliba waxa ay leedahay hadaf gaar ah oo lagu gaaro. Waa muhiim in cilmi baaruhu yaqano nuuca cilmi baariseed uu an baqadayo inta uusan howsha faraha lagelin. Waana in cilmi baaruhu ogaado mida uu hadafkiisa ku gaari karo. Waxaa marar badan dhacdo in la amba qaado cilmi baaris hadana natiijadi ka soo baxday ay miro dhal ahaan waydo amaba ay xiriir la yeelan waydo hadafki lagalaa cilmi baarista, taasina waxaa loo aneyaa in bilawgii hore, cilmu baaruhu uu san ogayn nuuca cilmi baariseed ee ku haboon waxa uu donayo. Qoralada soo sodo waxaan ku sharaxaynaa nuucyada cilmi bariseed.
Cilmi baaris Sahmiyeed (Exploratory study)
Cilmi barista nucaan ah waxaa la sameyaa marka ay san jirin wax horay looga qoray arintaan oo ay tahay marki ugu horeysay ee lagu sameyo cilmi baaris. Cilmi baaristu waxay isku dayaaysaa in aay ogaato xog badan oo la xiriirto arintaan madama ay tahay markii ugu horeysay ee cilmi baaris nuucasi la sameeyo. Darasad Sahmiyedku waa ay dabacsantahay (flexible) waxaa lagu xalin karaa nucyada kala duwan ee su,aalaha cilmi baarista sida (Sababta, Maxay, iyo Sidee). Cilmi baaristu waxa ay isku dayaysaa in ay soo bandhigto xog cusub iyadoo aysan jirin wax horay loo sii saadaaliyay ama loo mala awaalay (hypothesis). Hadaba cilmi baaris sahmiyeedka waxaa lagu soo kobaa sidan:-
In aqoon dheeraad ah iyo faah faahin laga helo waxa la baaraayo
In la curiyo fikir cusub, iyo in la hurumariyo aragtiyaha (theories)
In la curiyo malo awaal cusub (Hypothesis)
In wadada loo sii xaaro suurta galnimada in cilmi baaris kale oo dheeri ah la amaba qaado
In la helo jiho macayim ah loo raaco daraasadaha mustaqbalka
Cilmi Baaris Qeexineed (Descriptive research)
Cilmi baarista nucaan ah waxay qeexdaa arin gaar ah, waxayna diirada saartaa waxa dhacaya hada. Sidoo kale waxay diirada saartaa imisa jeer ayay horay u dhaceen arimaha nuucaan ah. Darasada kama hadasho sababta ay arin u dhacdo ama u dhacday intaba. Sababaha loo ambaqaado darasadan nuucan ah way fara badan yihiin waxaase ugu sii muhiimsan in la muujiyo xiriirka ka dhaxeeyo doorsoomayaasha (Variables ).
Marka darasadan la amabaqadayo cilmi baaruhu waxaa uu adeegsan karaa qidado kala duwan oo uu xogta ku soo ururiyo. Waxaan ka mid ah qidadaha. In uu indho indheen ku ururiyo xogta ama daraseen. Darasadu waxay u kuur galaa (xalada, dabeecadaha, dhaqanka iyo rayiga) ay leyihiin koox gaar ah. Sidoo kale waxaa la adegsan karaa waraysiyo kala duwan oo dadka lala yeelanayo.
Daarasda qeexida waa loo adegsan karaa hababka Taranta (quantitative) iyo Tayada (Qualitative) In la go,aamiyo nooca la adegsanaayo waxay ku xirantahay su,allaha cilmi baarista (Reseach Questions)
Cilmi Baaris Sharaxeed (Explanatory research)
Daraasada nuucaan ah waxay sharaxdaa sababta ay wax u dhacayaaan, waxay qimaysaa waxa sababo xiriirka ka dhaxeeyo doorsoomayaasha (Variables). Waxaa kaloo loo adegsadaa in lagu tijaabiyo xariirka ka dhaxeeyo mala awaanlka (Hypothesis) iyo samaynta ay isku yeelan karaan doorsooma yaasha. Cilmbi baaris sharaxeed ku waxay ka jawabtaa, sababta iyo sida ay wax u dhaceen. Waxay raadraacdaa waxa sababa iyo samaynta xiriirka ka dhaxeeyo labo doorsome.
Cilmi baaristan waxaa la amba qadaa marka xogta lahayo ay yartahay lana rabo in la sii faah faahiyo xogtaas yar oo la keeno faah faahin dheeri ah. Hadafki waxaa uu yahay in la helo xog badan.
Cilmi Baaris Saadaalineed (Predictive research)
Cilmi baarista nuucaan ah waxay waxay saadaalisaa ifafaalaha mustaqbalka iyo suurta galinimada waxaas in ay dhacaan. Cilmi baaristaan intabadan waxay ku bilaabataa in la raadiyo waxa dhici doono iyadoo laga qayaas qaadanayo wixi horay loo ogaa amaba horay u soo dhacay. Cilmi barista nuucaan ah waxaa lagu lifaqaa fasiraadi ay soo jeedisay cilmi baari sharaxeedki (Explanatory research)
Waysocotaa lasoco qaybaha kale (Continue…)